Doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa oo la mudeeyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa oo la mudeeyay
January 16, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa oo la mudeeyay. [Sawirka: Archive]
Muqdisho–(Puntland Mirror) Doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa ayaa la mudeeyay, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada.
Maxamed Cusmaan Dhagajuun oo ah guddoomiyah guddiga qabanqaabada doorashada ayaa digreeto uu soo saaray maanta oo Isniin ah waxa uu ku sheegay in 22-ka bishaan Janaayo ay dhacayso doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku xigeen.
21-ka Janaayo ayaa la dhageysan doona khudbadaha murashixiinta, sida lagu xusay digreetada.
Bilowga bisha Febrayaao ee soo socota ayaa la filayaa in xubnaha aqalka hoose iyo kuwa aqalka sare ay mudayn doonaan wakhtiga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada aadka loo sugayo ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.